Imelite gam akporo 10 dị ugbu a maka Realme 3 na 3i | Gam akporosis
Ihe ngosiputa nke gam akporo 10 di ugbu a maka Realme 3 na 3i: ozi niile na otu esi etinye ya
na 3 bu eziokwu y 3i ha bụ ngwaọrụ abụọ na-anabatakarị mmelite ngwanrọ ọnụ. Na nso nso a, ha nwetara nkwado maka VoWiFi na iji ngwa ngwa ngwa ngwa.
Ugbu a ekwentị abụọ na-anata gam akporo 10 site na mmelite ngwanrọ ọhụrụ, nke jikọtara ụdị nke ụdị nhazi nke ụlọ ọrụ China, nke bụ Realme UI.
1 Android 10 na-abịa Realme 3 na 3i
1.1 Android 10 akụkọ na mmelite na Realme UI maka Realme 3
1.2 Android 10 akụkọ na mmelite na Realme UI maka Realme 3i
Android 10 na-abịa Realme 3 na 3i
Dị nnọọ ka GSMArena emebi, Ihe ohuru nke Realme UI dabere na gam akporo 10 ma nwekwuo onu ahia. N'okpuru ka bụ ColorOS engine nwere arụmọrụ tweaks niile na-eso ya. Mmelite ahụ n'onwe ya na-eru ihe dịka 213MB ma ọ fọrọ nke nta ka ha yie ekwentị abụọ ahụ.
Portal ahụ a kpọtụrụ aha na-ekwukwa na yana ọhụụ ọhụrụ, ngwa ngwa ahụ na-agbakwunye njiri mara akụkụ, mmegharị mmegharị mma, ogwe ngosi nkwugharị, imeziwanye igwefoto, na ndị ọzọ. Nwere ike ịlele mgbanwe zuru ezu maka ekwentị abụọ na isi mmalite njikọ n'okpuru. Enwere ọtụtụ mgbanwe a ga-eme.
Mmelite ahụ n'onwe ya na-eru ihe dịka 213MB ma ọ fọrọ nke nta ka ha yie ekwentị abụọ ahụ. Iji wụnye ya, naanị ị ga-echere OTA iru ihe nlereanya ahụ na ngosipụta na-egosi ngwa ngwa ahụ. Enwere ike ikwenye nke a site na ngalaba ngwanrọ na ụdị mmelite. Tupu nbudata ya, dị njikere na ị na-jikọọ a Wi-Fi na netwọk na-enwe ezi batrị larịị. Marakwa na nke a ji nwayọọ nwayọọ na-agbasasị, yabụ ọ nwere ike ọ gaghị erube nkeji niile.
Anyị na-ahapụ nwoke ọ bụla gam akporo 10 mgbanwe log maka ekwentị abụọ n'okpuru.
Android 10 akụkọ na mmelite na Realme UI maka Realme 3
Emegharịrị onye ọrụ ntanetị ka realme ọrụ interface
Ọchịchị eze ọhụrụ ahụ na-eme ka ihe osise dịkwuo mma ma na-arụ ọrụ nke ọma.
Ama ogwe aka
Kachasị ọrụ interface na mma otu aka ọrụ.
Kachasị mma Smart Sidebar - Dochie faịlụ njikwa na Njikwa faili; wepụrụ nsonazụ OSIE na enweghị ọkwa ngosi.
Dọrọ otu ngwa nke smart sidebar imeghe ya kewaa ihuenyo mode.
Agbakwunyere atụmatụ ọhụrụ abụọ: "Enyemaka Opacity Ball" na "Zoo Enyemaka Ball na Full Screen App".
Kachasị n’elu mmiri window atụmatụ maka ngwa ndị ọzọ.
Akwụnye agbakwunye - A na-egosipụta afụ mgbe ị mepee ngwa na windo na-ese n'elu mmiri site n'akụkụ smart. Kpatụ afụ ka ọ daa ma ọ bụ mepee ngwa ahụ.
Ngosiputa ihuenyo mkpịsị aka kacha mma nke 3: Jiri mkpịsị aka 3 metụ ma jide ihuenyo ahụ, wee swipe iji nweta nseta ihuenyo nke akụkụ ahọpụtara ahọpụtara (nseta ihuenyo). Jiri mkpịsị aka aka atọ metụ ma jide ihuenyo gị, ma pịgharịa aka ka eweghara nseta ihuenyo dị ogologo.
Agbakwunyere nseta ihuenyo: can nwere ike ịgbanwe ọnọdụ nke nseta ihuenyo preview sere n'elu window na ịtọ ihuenyo nseta ihuenyo.
Kachasị nseta ihuenyo preview sere n'elu window: Mgbe na-a nseta ihuenyo, ịdọrọ ya na dobe ya ịkọrọ ya, ma ọ bụ ịdọrọ ya ala na dobe ya na-a ogologo nseta ihuenyo.
Mmegharị njegharị 3.0
Mgbatị kachasị mma: a na-akwado mmegharị niile na ọnọdụ ihu igwe.
Modekpụrụ Mgbakwunye Agbakwunye: Belata ihe ndọpụ uche dị na mpụga mgbe ị na-amụ ihe ma ọ bụ na-arụ ọrụ.
Agbakwunyere animation ohuru ohuru.
Kachasị Ntọala Ntọala UI maka ịrụ ọrụ otu aka.
Agbakwunyere na ịkwụsịtụ ọrụ maka ndekọ ihuenyo.
Tụkwasị na windo na-ese n'elu mmiri na ntọala maka ndekọ ihuenyo.
A na-agbakwunye ụda ọhụrụ maka nhichapụ faịlụ, usoro ihe mgbako na compass pointer.
Kachasị usoro wuru na-ụdaolu.
A na-agbakwunye ozi TalkBack na-ese n'elu mmiri maka nnweta.
Nchịkwa njikwa ọhụrụ maka ọrụ ndị na-adịbeghị anya: can nwere ike ịlele ebe nchekwa nke ọrụ ndị a na-adịbeghị anya na ngwa ekpochi.
Visual mmekọrịta kachasị maka Game Space.
Loading animation kachasị maka Egwuregwu Space.
Nka na akwụkwọ ahụ aja kwukwara.
Agbakwunyere iji mepee Global Search ma ọ bụ ngosi ngosi site na ịpụ na ihuenyo ụlọ.
Tụkwasị nhọrọ iji hazie nha, ọdịdị na ụdị akara ngosi ngwa na ihuenyo ụlọ.
Kachasị paswọọdụ kpọghee eserese imewe maka mfe otu aka ọrụ.
Nkwado maka animated na akwụkwọ ahụ aja na mkpọchi ihuenyo.
Agbakwunyere ọnọdụ dị mfe maka ihuenyo ụlọ, nwere nnukwu mkpụrụedemede, akara ngosi, na nhazi doro anya karị.
Random MAC Address Generator: Mgbe ekwentị gị jikọtara na netwọk Wi-Fi ọ na-ewepụta adreesị MAC na-enweghị usoro iji zere mgbasa ozi ezubere iche ma kpuchido nzuzo gị.
Na Ndenye Ntọala ma ọ bụ Smart Sidebar, ị nwere ike mepee Calculator na windo na-ese n'elu mmiri.
Agbakwunyere trimming atụmatụ na E.
Agbakwunyere ụda olu (ike), nke na-agbanwe na ihu igwe ugbu a.
Agbakwụnyela ihu igwe na-eme ihu igwe na Weather.
Kachasị mma igwefoto UI maka ezigbo ahụmịhe onye ọrụ.
Kachasị mma UI na ngụ oge ụda.
Kachasị mma na UI album maka ihe doro anya na ndozi foto.
E tinyela nkwanye ụda na-amata ihe karịrị ọnọdụ 80 dị iche iche.
Realme Share ugbu a na-akwado ịkekọrịta faịlụ na ngwaọrụ OPPO, Vivo, na Xiaomi.
Emechara m kọntaktị UI maka ahụmịhe nke ọma.
Ntọala ọchụchọ na-akwado cha cha cha cha cha ma nwee akụkọ ọchụchọ.
Android 10 akụkọ na mmelite na Realme UI maka Realme 3i
Pathzọ zuru ezu na edemede: Gam akporosis » Noticias » Ihe ngosiputa nke gam akporo 10 di ugbu a maka Realme 3 na 3i: ozi niile na otu esi etinye ya
Redmi Rịba ama 9 na Redmi Rịba ama 9 Pro (Global) kwupụtara: Nnukwu Batrị na Quad Igwefoto maka Ha abụọ
Black Shark 3 na 3 Pro ga-abata na Europe na 8 Mee